China 2021 ngwaahịa ọhụrụ 2000W Led strobe na -akpụ akpụ isi ọkụ ọkụ ọkwa nrụpụta na ụlọ nrụpụta | Efe
2021 ngwaahịa ọhụrụ 2000W Led strobe na -akpụgharị isi ọkụ ọkụ ọkwa ọkachamara ọkachamara
2021 ngwaahịa ọhụrụ 2000W Led strobe na -akpụgharị isi ọkụ ọkụ ọkwa ọkachamara, bụ ụdị ọkụ strobe ọhụrụ anyị mepụtara. N'ahịa dị ugbu a ọtụtụ ọkụ ọkụ strobe dị elu bụ ọkụ kwụ ọtọ, anyị bụ ụlọ ọrụ izizi na China nke na -eme ka ọkụ na -enwu enwu dị ka ọkụ isi na -agagharị agagharị. Rite uru site na ahụmịhe mmepe ngwaahịa ngwaahịa ọkụ ọkụ nke LED, anyị nwere ike chepụta ya ka ọ bụrụ ezigbo usoro jụrụ oyi iji nweta nchapụta dị elu mana obere nha. mmepụta oke tupu ebido banye n'ahịa.
Ejikọtara ya na akụkụ abụọ, etiti bụ 96 iberibe 10W ọcha Led, akụkụ abụọ bụ mkpokọta 768 0.5W RGB 3in1 Led.Ekewara mpaghara etiti ọcha n'ime ngalaba 4. A na -ekewa mpaghara RGB mara mma na ngalaba 12, jikwaa DMX512, RDM protocol.
Nnukwu ihie na ike strobe, ngalaba anya zuru oke na -agbada, ụdị mmetụta 56 ọrụ Marco na -arụ ọrụ. Ngwa ngwa ngwa 1-25 Hz/S.
2021 ngwaahịa ọhụrụ 2000W Led strobe na -akpụgharị isi ọkụ
ọkụ ogbo ọkachamara
Ọ bụ ọkụ ọkụ mbata ọhụrụ 2021, nke ewepụtara n'onwe ya site na enweghị ọkụ. Tupu R&D nnukwu ọkụ a Led strobe na -akpụ akpụ isi, afọ 3 gara aga, anyị emebela ma mepụta ọkụ strobe n'èzí wee nweta ahịa na nzaghachi dị mma n'ahịa.
Ụdị ọhụrụ a Led strobe na -akpụ akpụ isi, ọ bụghị naanị dozie nsogbu nke ọkụ strobe nkịtị nke nchapụta ezughi oke ma ọ bụ agba ezughị oke bara ọgaranya, kamakwa dozie nsogbu ahụ enweghị ike ịtọ ntụzịaka dị iche iche nke ọkụ strobe static na ogbo.
Ọrịa strok a na -enwu sistemụ agba ya site na nnukwu RGB 3in1 Led + White Led.
White Led jikọtara ya na 96*10W LED, mmetụta akụkụ 4.
RGB 3in1 Led jikọtara ya na 768*0.5W led, mmetụta ngalaba 12.
Mpe ya na tilt ya jiri motọ na -adọ 3 wee nye ọnọdụ ngwa ngwa, dị larịị, na arụ ọrụ dị jụụ. Mgbasa oke ọkụ dị elu yana nchapụta dị elu yana ike strobe. A na -echekwa ụdị mmetụta 56 ọrụ Marco na -eme ka ọ nwee mmetụta bara ụba.
Isi mmalite 768*0.5w RGB 3-in1 LED, 96*10w white led (6500K) Pan 540 Celsius, izi ezi 2.11 Celsius/nzọụkwụ, izizi ziri ezi: 0.008 Celsius;
Beam n'akuku 130 Celsius Tiit 270 Celsius, izi ezi 0.86 Celsius/nzọụkwụ, izizi ziri ezi: 0.0034 Celsius;
Oriri Ike 1200W Na -eji sistemụ nrụpụta magnetik
Ọnọdụ DMX 10/15/25/29 CH Nbanye data/oghere 3-pin & 5-pin XLR ntọala
ngalaba nyocha anya zuru oke, izizi ọkwa ọkwa 65536; Ogo nchedo IP20
Ngwa ngwa ngwa 1 ~ 25Hz; Nkọwapụta
A na -ekewa ọkụ ọcha na mpaghara 4 iji chịkwaa, na ekewa agba na mpaghara 12 iji chịkwaa; Akụkụ 376 × 490 × 388mm; NW: 17 n'arọ
Tọọ ụdị ọrụ mmetụta macro 56 dị iche iche Ngwugwu ọkọlọtọ: katọn; Ikuku ụgbọ elu na nhọrọ
Nchọpụta ihe mmetụta okpomọkụ, ngbanwe amamihe nwere isi ọkụ Asambodo
Ụdị mbanye mbanye oge niile installed A rụnyere nko nke apịachi OA, ROHS
Ajụjụ:Biko nye ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị nwere nkwado CE ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ịnweta nkwenye n'oge adịghị anya?
RE: Ihe niile na -ewepụta asambodo CE & RoHS, nwee akụkọ EMC & LVD
Ajụjụ: Enwere m ike nweta nlele n'efu?
Re: Daalụ maka ebumnuche gị ịnwale ma lelee ọkụ anyị, anyị nwere ekele dị ukwuu, ebe enweghị ike ịnye nlele efu dị ka nnukwu uru ya, daalụ maka nghọta gị. mana n'ezie m ga -agba mbọ kacha mma ịnye gị ezigbo ọnụ ahịa n'usoro n'usoro dịka ọnụọgụ gị siri dị.
Ajụjụ: Gịnị’ọ bụ MOQ gị maka ngwaahịa a?
Re: 1 ibe, dịka anyị ghọtara ndị ahịa nwere ike chọọ ịnwale nlele mbụ na mgbe ụfọdụ.
Ajụjụ: Kedu maka nkwa ahụ?
RE: 2 afọ akwụkwọ ikike. N'oge akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na ọkụ emee nsogbu ọ bụla, anyị ga -enyocha gị wee kpochapụ nsogbu ahụ wee ziga ngwa ngwa dochie akụkụ asap.Ọ bụrụ na akwụkwọ ikike agwụla, anyị ga -enye nduzi teknụzụ wee ziga akụkụ ahụ mapụtara.
Ajụjụ: Mgbe m nyere iwu, enwere m ike nweta ụfọdụ akụkụ ahụ mapụtara na FOC?
Re: A ga -enye 1% ihe ndozi n'efu ma ọ bụrụ n'usoro n'usoro, obere ego anyị anaghị enye akụkụ ahụ n'efu.
Nnyefe ngwaahịa ụlọ ọrụ
Nke gara aga: 25x40W Ime Anwansi Mgbakọ Matrix mbugharị ihu nwere ihu abụọ na ọkụ strobe
Osote: Igwe dị elu dị elu IP65 4x200w 800w COB Led blinder light
F800-9*60w doo na asacha mmanya na-akpụ akpụ ọkụ wi ...
660-6*60W Pixels na-achịkwa mbugharị mbugharị mbugharị mbugharị h ...